Leela Chess Zero, yakangwara yakavhurwa sosi chess injini | Linux Vakapindwa muropa
Leela Chess Zero (LCZero kana LCZ) yakaunzwa senge yemahara uye yakavhurwa sosi chess injini. Yakagadziriswa naAlexander Lyashuk naGary Linscott, anova anovandudza chirongwa cheStockfish. Leela Chess Zero Iyo yakafuridzirwa neinjini yeLeela Zero, iyo yakavakirwa pane DeepMind's AlphaGo Zero chirongwa.
Leela Chess Zero ndeye UCI inoenderana chess injini yakagadzirirwa kutamba chess kuburikidza neine neural network. SaLeela Zero uye AlphaGo Zero, Leela Chess Zero anoziva chete mitemo yemutambo uye hapana chimwe chinhu.
Injini ye chess ine algorithm iyo inotarisisa kufamba kwakanyanya munzvimbo yakapihwa.
Aya maonerwo akasiyana kubva kune mumwe nemumwe, ivo vane maitiro ekugadzirisa ekutamba, rimwe zita uye masystem masisitimu, muchidimbu, vane hunhu. Iko kune ese matanho uye anogona kuve ekutengeserana, akavhurwa sosi, kana emahara.
Zvisinei, Izvo zvinodikanwa kusiyanisa graphical interface kubva kune chess injini. Iyi interface yemushandisi (kana GUI chess) ndiyo chirongwa chicha gamuchira, mhanyisa idzi injini uye ichagadzirisa nharaunda inoonekwa kune mushandisi (chess bhodhi, ruzivo rwekuverenga mamamojuru, kuongororwa kwechinzvimbo, kushandiswa kwetafura zvigadziko, kudzika kweKuferefeta, kuchinjisa kwemisiyano, nezvimwewo).
Aya mapindiro anotenderawo injini kuti dziwane mumwe panguva yemitambo. Imwe bhenefiti ndeyekuti programmers vanogona kutarisisa mashandiro einjini yavo vasingatore manejimendi anoonekwa eiyo chessboard.
Aya maficha anogona kunge ari XBoard / WinBoard, Arena kana Chessbase (yekutengesa).
1 About Leela Chess Zero
2 Maitiro ekuisa Leela Chess Zero paLinux?
About Leela Chess Zero
Leela Chess Zero inodzidziswa pane yakatsaurwa webhusaiti. Mwedzi mishoma yekuvandudza uye kurovedza yakakwana kuti Leela Chess Zero isvike padanho reGMI (kureva zita reInternational Grand Master (GMI), rakagadzirwa kubva muna1950, raishandiswa mune chess uye macheki). Inodarika shanduro dzekare dzeRybka, Stockfish kana Komodo, zvakare ine simba injini chess, ichiongorora mashoma nzvimbo kupfuura aya mapurogiramu.
Muna Kubvumbi 2018, Leela Chess Zero yakave yekutanga neural network-yakavakirwa injini kupinda muSuperior Chess Injini Yechikwata (TCEC) mumwaka wegumi nembiri mudiki diki.
Maitiro ekuisa Leela Chess Zero paLinux?
Kune avo vanofarira kuyedza Leela Chess Zero, vanofanira kutanga vaziva kuti pane vhezheni itsva yeLeela Chess Zero, vhezheni 0.21.2, inowanikwa kubva muna Chikumi uye inowanikwa paGitHub.
Kuburitswa uku kunosanganisira shanduko dzinotevera:
Kugadziriswa kwemakadhi eGTX 16xx (cudnn-fp16 ikozvino inovashandira, kunyangwe ikasavandudza mashandiro, pamwe nemakadhi eRTX)
iro "Post-it" basa rinogoneswa nekutadza: izvi zvinovandudza mutambo weLC0 kana iwe ukaona waunotamba naye kumwe kunhu panguva yekutsvaga
Centipawn fomula yakagadziridzwa: LC0 ikozvino inoratidza maitiro ekuwongorora zvakanyanya zvakafanana nezviri kuratidzwa nemamwe injini
Kugadziridza kweiyo yakazara neural network (mamwe mafirita) emangwana anomhanya (pamwe test60).
Zvino, achakwanisa kurodha pasi mafaera, izvo izvi uye izvi zvimwe.
Aya mafaera Ivo vanofanirwa kuvasunungura uye neakaguma maforodha tichaita zvinotevera
Tichapinda muhodha "lczero-yakajairika-tenzi"Mukati maro tichawana folda inonzi"proto", Tichafambisa dhairekitori iyi tigoisa mune iro rinouya iro folda iro"LeelaChessZero-lc0-46e4053"Asi mukati meimwe folda iri mukati"libs" Chii "lczero-yakajairika"
Kusiya nzira inotevera "LeelaChessZero-lc0-46e4053 / libs / lczero-common / proto".
Iye zvino pano mugadziri anotipa zvimwe zvinoratidza:
Kana iwe uchida kushandisa makadhi emifananidzo eNVidia, ndapota isa CUDA uye cuDNN.
Kana iwe uchida kushandisa AMD mifananidzo kadhi, ndapota isa OpenCL.
Kana iwe uchida iyo OpenBLAS vhezheni ini ndinoisa OpenBLAS (libopenblas-dev).
Kuti tiite musangano uyu isu tinofanirwa kunge taive ninja-kuvaka, meson uye sarudzo gtest (libgtest-dev).
Iko kuunganidzwa kuchaitwa nekuenda kune dhairekitori hombe nekuita iyo faira:
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvishoma nezvayo, pamwe nedzimwe nzira dzekumisikidza kune mamwe maratidziro eLinux akadai seUbuntu, kuvhuraSUSE uye paRaspberry Pi iwe unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Leela Chess Zero, yakangwara yakavhurwa sosi chess injini
Iyi mirairo ndeyekunyora yazvino vhezheni, muDebian / Devuan iwe unogona kuisa yakaderera yazvino vhezheni, kubva kune yepamutemo repos
sudo apt-tora kuisa leela-zero
Ini ndinosiya chirevo kune avo vari kutsvaga info uye vasvike pano
Pindura kuna debianita-feroz